အမူအကျင့်စွဲဥကိုဖမ်းမိခြင်း။ Reward Deficiency Solution System သည် dopaminergic Neurogenetics နှင့် ဦး နှောက်၏အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် Reward Deficiency Solution System သည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတူညီသောခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ချိတ်ဆက်ပေးသည် (2014) - Your Brain On Porn
အဆိုပါအမူအကျင့်စွဲကြက်ဥ Hatching: dopaminergic neurogenetics နှင့်ဘုံအခုလည်းအောက်၌ရှိသမျှသောစှဲချိတ်ဆက်ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု (2014) ၏ function ကိုအဖြစ် Deficiency ဖြေရှင်းချက်စနစ်၌ဆပ်
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2014 စက်တင်ဘာ;3(3): 149-156 ။
2014 သြဂုတ် 26 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1556 / JBA.3.2014.019
Kenneth BLUM,1,3,7,* မာစီလို FEBO,1 သောမတ်စ် MCLAUGHLIN,2 Frank ဂျေCRONJÉ,8 ဒေးဗစ်ဟန်,9 နှင့် အက်စ်မာကုရွှေ1,3
နောက်ခံသမိုင်း: dopamine D2 receptor gene polymorphism နှင့်ပြင်းထန်သောအရက်သေစာများအကြားပထမဆုံးအကြိမ်ဆက်သွယ်မှုအပြီးတွင်စိတ်ရောဂါနှင့်အမူအကျင့်စွဲစာပေနှင့် neurogenetics တွင်သုတေသနအစီရင်ခံစာများပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤဗဟုသုတတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အတူအငြင်းပွားမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ထို့အပြင် Functional Genome Convergence နှင့်အတူ Whole Genome-Wide Studies (GWAS) နှင့် Whole Exome Sequencing (WES) များထွက်ပေါ်လာခြင်းနှင့်အမျှမျိုးစုံ - ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမျိုးဗီဇချဉ်းကပ်မှုသည်ထိုက်တန်ဆဲဖြစ်ပြီးလူအများစုကအမြော်အမြင်အရှိဆုံးသောချဉ်းကပ်နည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်နှင့် etiology ၏အစစ်အမှန်မျိုးရိုးဗီဇ allelic ဆက်နွယ်မှုကိုသတ်မှတ်ပေးလိမ့်မည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းသည် Reward Deficiency Syndrome (RDS) ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုဒြပ်ထုနှင့်ပစ္စည်းမဟုတ်သော၊ စွဲစေသည့်အပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သောဘုံအာရုံကြောဓာတုနှင့်မျိုးရိုးဗီဇယန္တရားများကိုရှင်းပြရန်တီထွင်ခဲ့သည်။ နည်းလမ်းများ: ဤသည် Pubmed နှင့် Medline တွင်ဖော်ပြထားသည့်ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းများကိုရွေးချယ်ထားသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်များ: ရရှိနိုင်သည့်အထောက်အထားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည် dopaminergic လမ်းကြောင်းများနှင့် ဦး နှောက်အတွက်အကျိုးရှိသောဆားကစ်များ၏အလုပ်လုပ်နိုင်မှုဆက်သွယ်မှု၏အရေးကြီးပုံကိုဖော်ပြသည်။ ဆွေးနွေးချက်: အရေးကြီးသည်မှာအဆိုပြုချက်သည်အစစ်အမှန် phenotype သည် RDS နှင့် ဦး နှောက်၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်တွင်ဗီဇဖြစ်စေ၊ မျှဝေထားသောဘုံယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုကိုကြက်ဥပေါက်” ပြီဟုမပြောနိုင်သေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်သောမေးခွန်းများကိုစတင်စပြုလာကြပြီးအပြင်းအထန်ကမ္ဘာချီအားထုတ်မှုဖြင့်“ ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရွေးနုတ်ခြင်း” နှင့်ခွင့်ပြုခြင်းနည်းလမ်းကိုမျှော်လင့်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည် Homo Sapiens စွဲလမ်းမှုနှင့်နာကျင်မှုကင်းသောဘဝကိုနေထိုင်ပါ။
keywords: neurogenetics, ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု၊ dopaminergic၊ Reward Deficiency Syndrome, dopamine agonist ကုထုံး
Blum et al ။ ယခင်က Reward Deficiency Syndrome ၏ neurogenetics (ဆောင်းပါးများထုတ်ဝေသည်)RDS) အရာ ၀ တ္ထုနှင့်အရာ ၀ တ္ထုမဟုတ်သော၊ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ ()Blum, Oscar-Berman, Badgaiyan, Palomo & Gold, 2014) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေသည့်အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြုလုပ်နေစဉ်တွင်ဤနယ်မြေအသစ်တွင်အလုပ်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသော်လည်း၎င်းသည်ပစ္စည်းမဟုတ်သော၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများအတွက်မဟုတ်ပါ (Demetrovics & Griffiths, 2012).
ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏အဓိကပန်းတိုင်မှာအငြင်းပွားမှုအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပြရုံသာမကအရာ ၀ တ္ထုမဟုတ်သော၊ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများအကြားဖြစ်နိုင်ခြေဆက်နွယ်မှုများကိုပြသရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်မှာအပြုအမူနှစ်မျိုးလုံးအတွက်ဘုံမူဘောင်တစ်ခုပေးရန်ဖြစ်သည်၊Blum et al ။ , 1996) ။ ဤစာချုပ်ကိုအနာဂတ်ပြည့်စုံသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုဟုမယူဆသင့်ပါ။ အနာဂတ်နှင့်အမြော်အမြင်ရှိသောစွဲလမ်းမှုဖြေရှင်းနည်းများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဆက်နွှယ်မှုအတွက်အရေးကြီးသောဆက်နွယ်မှုတစ်ခုအားဆက်ပြောသည်။
Blum et al အားဖြင့်မူလအလုပ်ပြီးနောက်။ (1990), သောဆက်စပ်သော Taq-A1 ပြင်းထန်သောအရက်နှင့်အတူ dopamine D2 receptor ၏ allele, အခြားသုတေသီများအငြင်းပွားဖွယ်သို့မဟုတ်ကိုက်ညီမှုတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံတင်ပြသည်အချို့သောထိန်းချုပ်မှုစိစစ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ ညံ့ဖျင်းသောစစ်ဆေးမှုဥပမာတစ်ခုကို Creemers et al ၏လက်ရာတွင်တွေ့နိုင်သည်။ (2011ဒတ်ခ်ျယေဘုယျလူ ဦး ရေအတွက်ဆုလာဘ် - ရှာဖွေခြင်းအပြုအမူအတွက် dopaminergic ဗီဇ polymorphic ၏အခန်းကဏ္toကိုမှဆွေမျိုးအနုတ်လက္ခဏာတွေ့ရှိချက်သတင်းထုတ်ပြန်သူကို) ။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်သိမ်မွေ့သော Reward Deficiency Syndrome (RDS) အပြုအမူများပါ ၀ င်မှုသည်မှားယွင်းသောရလဒ်များသို့ ဦး တည်နိုင်သည်ဟုသတိပေးခဲ့သော်လည်းပြproblemနာသည်ယနေ့တိုင်ဆက်လက်ရှိနေသေးသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်မှစ၍ DRD1990 ဗီဇတစ်ခုတည်းတွင်အမျိုးမျိုးသောအရံနှင့်ဗဟို ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ် (CNS) အပြုအမူများနှင့်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များ (စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော) အကြောင်း ၃၇၃၈ (PubMed-၆-၂၃-၁၄) ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဆောင်းပါးများထက်နည်းသည်မရှိခဲ့ပါ။ နားလည်နိုင်သည်မှာဆေးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော RDS ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောမျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် DRD3738 ကဲ့သို့သောမျိုးရိုးဗီဇတစ်ခုသည်သီးခြားသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူအနုတ်လက္ခဏာလေ့လာမှုများစွာရှိသော်လည်း DRD6 gene polymorphism နှင့်စွဲလမ်းစေသော၊ စွဲလမ်းမှုမရှိသော၊ ဆုလာဘ်အပေါ်မှီခိုနေသည့်အပြုအမူများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အပြုအမူများနှင့်အပြုသဘောဆက်စပ်သောသိသာထင်ရှားသည့်သက်သေအထောက်အထားများကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ စားပွဲတင် 1.
ဒါဟာ၏အရေးပါမှုကိုစောဒကတက်ခဲ့သည် Taq 1A polymorphic ချို့တဲ့ဆုလာဘ်မှ ဦး ဆောင်သည့်နျူကလိယ accumbens အတွက် neurotransmission အတွက်ဆက်စပ်ကျဆင်းခြင်း၌တည်ရှိသည်။ နေစဉ် striatal DAD2 receptors ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဘာသာရပ်များ၏လေ့လာမှုပုံရိပ်အစီရင်ခံခဲ့သည် Taq 1A polymorphic, ဤတွေ့ရှိချက်များ၏အရေးပါမှုကိုမသိရသေးပါ။ နှင့်အတူဘာသာရပ်များ၏ပေလေ့လာမှုများ Taq 1A polymorphic သိသိသာသာတိုးမြှင့် DA ပေါင်းစပ်နှင့်ကိုက်ညီ 18F-6FDOPA ၏ striatal စားသုံးမှုတိုးမြှင့်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ DA ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိခြင်းတိုးပွားလာပါကမည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ဤသည်တိုးလာ extracellular DA အဆင့်များ (ဥပမာ striatal D2 auto-receptors တစ်ခုလျော့နည်းသွားမှုကြောင့်) ကိုတုန့်ပြန်သော DAD2 receptors များလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ဤသီအိုရီမှန်ကန်ပါက၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုနှင့်ဆိုင်သော surfeit သီအိုရီနှင့်ဆန့်ကျင်လိမ့်မည်။ အမှန်စင်စစ်၊ surfeit သဘောတရားများကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုတိုးပွားလာမှုကိုရှင်းပြရန်တိုးချဲ့ပြီး၊ အလွဲသုံးစားမှုတိုးလာခြင်းသည်နျူကလိယအက်တမ်တွင် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုတိုးလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်မကြာသေးမီကသက်သေအထောက်အထား (Willuhn, Burgeno, Groblewski & Phillips, 2014) ဒီအနက်ကိုဆန့်ကျင်စောဒကတက်သည်။ အမှန်စင်စစ်ဤစာရေးဆရာများကကိုကင်းအလွဲသုံးမှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းသည် dopaminergic လုပ်ဆောင်မှုနည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ထို့ကြောင့်ရှုပ်ထွေးသောဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်စွဲလမ်းမှုကိုကုသရန်အတွက်ရန်လိုသည့်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်းထက်ရန်လိုခြင်း၏မျက်နှာသာပေးကြသည်။
ပြနာများနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာ - Dopaminergic Surfeit or Deficit?
dopaminergic ဗီဇပြောင်းလဲမှုများအကြားဆက်စပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားစရာရှိသည်၊ ဥပမာ dopamine Transporter gene (DAT) နှင့် BMI ။ Chen et al ။ (2008) BMI နှင့် striatal DAT1 အဆင့်များအကြားသိသိသာသာအနုတ်လက္ခဏာဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်၊ သို့သော် van de Giessen et al ။ (2013) ဒီအသင်းအဖွဲ့အတည်ပြုမပေးခဲ့ပါဘူး ဤလေ့လာမှုတွင် 'ကျန်းမာသော' အဝလွန်သူများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် RDS အပြုအမူများကိုစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်သံသယဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ Thomsen et al မှထိုကဲ့သို့သောအသင်းအဖွဲ့မဟုတ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ (2013ဒါ့အပြင်ဒါ့အပြင်ကျန်းမာအဝလွန်ဘာသာရပ်များကိုအသုံးပြု။ သူကို။ BMI နှင့် DAT1 အနုတ်လက္ခဏာဆက်နွယ်မှုကိုထောက်ခံသည့်အခြားအစီရင်ခံစာများလည်းရှိသည်။Fuemmeler et al ။ , 2008; လိုအပ်, Ahmadi, Spector & Goldstein, 2006; Sikora et al ။ , 2013; Valomon et al ။ , 2014; ဝမ် et al ။ , 2011) ။ DAT1 နှင့် BMI ၏အနှုတ်လက္ခဏာအသင်းကို Danilovich, Mastrandrea, Cataldi နှင့် Quattrin တို့ကထောက်ခံသည်။2014), DAT1 ကိုပိတ်ဆို့ထားကြောင်းသိသောမက်သာအဖက်တမင်းသည်အဆီနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်စားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေကြောင်းပြသခဲ့သည်။
နောက်ထပ်အငြင်းပွားဖွယ်ရာတစ်ခုမှာ BMI ၏အဝလွန်မှုအတွက်ဇီဝဗေဒအမှတ်အသားအဖြစ် Shah နှင့် Braverman ကဲ့သို့သောကိစ္စဖြစ်သည်။2012) ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထောက်ပြ - ရာခိုင်နှုန်းကခန္ဓာကိုယ်အဆီနှင့်ဆိုးရွားစွာနှိုင်းယှဉ်။ ဤသည်နိဂုံးချန် et al အားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ (2012), DRD2 ၏သယ်ဆောင်သူများအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိရပါသည် Taq-A1 နှင့် DRD2 သယ်ဆောင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခန္ဓာကိုယ်အဆီရာခိုင်နှုန်းပိုမိုမြင့်မား Taq-A2 ။
သကြားစွဲအဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟူသောနိဂုံးချုပ် (Hone-Blanchet & Fecteau, 2014) လည်းအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သက်သေအထောက်အထားများသည် DSM-5 တွင်လက်တွေ့အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်အရာ ၀ တ္ထုအသုံးပြုမှုမမှန်မှုများအကြားနှောင်ကြိုးနှင့်အစားအစာဆုကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။Brownell၊ ၂၀၁၂; ရွှေ & Avena, 2013).
Blum et al ။ (2011) bariatric နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာပြproblemနာအဖြစ်စွဲလွှဲပြောင်းနှင့် Dunn et al ၏လုပျငနျးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ (2010dopaminergic activation နှင့်ဆက်နွယ်သော Self- အုပ်ချုပ်နေသည့်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်အပြုအမူများပိုမိုလိုအပ်ချက်ကိုဖော်ပြသော Bariatric ခွဲစိတ်မှုအပြီးတွင် D2R ရရှိနိုင်မှု (hypo-dopaminergic state) ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, Steele et al ။ (2010ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ခြောက်ပတ်အကြာတွင် D2R အဆင့်တိုးမြင့်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဝလွန်သောဘာသာရပ်ငါးခုတွင် Bariatric ခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီ D2R ရရှိမှုနည်းသည်။ တိုးမြှင့်သော dopamine လက်ခံမှုသည်ဆေးဝါးနှင့် / သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်သော dopaminergic function နှင့်ဆက်စပ်သည့်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။ သို့သော် Dunn et al မှတွေ့ရှိသောကြောင့်ဤမေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ (2010), Steele et al အားဖြင့်ခြောက်ပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခုနစ်ပတ်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကနေဆင်းသက်လာ။ (2010), တစ် hypo-dopaminergic ရိုမှတဖန် ဦး ဆောင်နေတဲ့အောက်ဖက်လမ်းကြောင်းသစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးလွှဲပြောင်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောယူဆချက်သည်ဘေရီယက်ရီယမ်ခွဲစိတ်ကုသမှုလွန်ကဲသောကာလများနောက်မှ ပိုမို၍ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် D2R ရရှိနိုင်မှုလျော့နည်းမှုအတွက်သက်သေအထောက်အထားများရှိနေစဉ် (Volkow et al ။ , 2009ဤပြင်းထန်သောအဝလွန်ခြင်းအတွက်သာမှန်ကန်သည်ဟုစောဒကတက်သည်။Eisenstein et al ။ , 2013; Kessler, Zald, Ansari, Li & Cowan, 2014) ။ ရှုပ်ထွေးစေသည့် variable များ၌အခြား RDS အပြုအမူများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းမပြုရသေးသော BMI ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် phenotype နှင့်ပျော့ပျောင်းသောအဝလွန်ခြင်းသည်အစစ်အမှန်ရောဂါကိုပြသနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်သင့်လျော်မှုမရှိပေ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူအတော်များများဆွေးနွေးသည့်အတိုင်းစစ်မှန်သော endophenotype ကိုပေးရာတွင်“ severity” ကိုအသုံးပြုခြင်း (Blum et al ။ , 1990; ကော်, လူငယ်, Lawford, Ritchie & Noble, 2002)“ ပျော့ပျောင်းသောရောဂါများ” နှင့်ဆက်စပ်သောပြphenနာကို phenotype တစ်ခုအဖြစ်အလေးထားသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ Volkow အဖွဲ့သည်အနည်းဆုံးစာရွက်စာတမ်း ၁၃ ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၎င်းတို့၏မူလအယူအဆကိုထောက်ခံသည့်အဝလွန်မှုတွင် D13R နည်းပါးသည်။Tomasi & Volkow, 2013) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လျှော့ချ D2R ရရှိမှုအဝလွန်ခြင်းအတွက်အသစ်အဆန်း - ရှာကြံနှင့်ဆက်စပ်သောမတွေ့ရှိခဲ့ (ဗေ့ခ်ျ et al ။ , 2014).
dopamine D2 နှင့် D4 နှစ်မျိုးလုံးတွင် polymorphic အကျိတ်များကအာဟာရပြည့်ဝသောအစားအစာများနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်းကိုတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်စေသည်ဟု Stice အဖွဲ့မှသက်သေအထောက်အထားများရှိသည်။Stice & Dagher, 2010; Stice, Davis, Miller & Marti, 2008; Stice, Spoor, Bohon & Small, 2008; Stice, Spoor, Bohon, Veldhuizen & Small, 2008; Stice, Yokum, Blum & Bohon, ၂၀၁၀; Stice, Yokum, Bohon, Marti & Smolen, 2010; Stice, Yokum, ဘာဂါ၊ Epstein & Smolen, 2012; Stice, Yokum, Zald & Dagher, 2011) ။ သူတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာစက္ကူ Stice et al ၌တည်၏။ (2012) fMRI ကို အသုံးပြု၍ လူငယ်တွင် striatal dopamine neurotransmission တိုးမြှင့်ခြင်းသည်အဝလွန်ခြင်းအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းကိုပြသရန်။ စင်စစ်၎င်းသည် Berridge နှင့် Robinson မှတင်ပြသော surfeit dopamine သီအိုရီကိုထောက်ခံသည်။2000) နှင့်မှန်ကန်စွာအစာစားခြင်းမမှန်များ၏ရှုပ်ထွေးမီးမောင်းထိုးပြ။ အစားအစာအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုတိုးပွားလာသောလူတစ် ဦး သည် dopaminergic function ၏စည်းကမ်းချက်များအရလိုငွေပြမှုသို့မဟုတ် surfeit သီအိုရီများကိုထောက်ခံသည့်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ သို့သော်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် (epigenetics) နှစ်ခုလုံးအပေါ် အခြေခံ၍ သုတေသန၊ ကျား၊ မ၊ သက်တမ်းနှင့်“ liking & wanting” ၏စည်းကမ်းချက်များအရဤကွဲပြားခြားနားမှုများကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။Blum, Gardner, Oscar-Berman & Gold, 2012; Willuhn et al ။ , 2014).
ဤအချက်မှာမည်သည့်ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းအတွက်မဆို“ ဆေးကုသခြင်း” သို့မဟုတ်“ မှော်ဆေး” ဟူ၍ မရှိသေးပါ။ RDS အပြုအမူများ၊ အထူးသဖြင့်အမူအကျင့်ခွဲခြားခြင်းများ (ယူအက်စ်အက်ဖ်အေမှအတည်ပြုထားသောဆေးဝါးအထောက်အကူပြုဆေးဝါးများသာဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောဆေးဝါးများ) မရှိပါ။ Naltrexone နှင့် Acamprosate တို့ကဲ့သို့သောရန်လိုသည့်အရာများမှ dopamine သွေးဆောင်သည့် Euphoria သည်။ dopamine agonist ကုထုံး၏အရေးပါပုံကိုနားလည်ခြင်းသည်အပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအားလုံးကိုကုသရန်အတွက်သဘာဝ dopaminergic လုပ်ဆောင်မှုကိုပိတ်ဆို့မည့်အစားရေရှည်တွင် ပို၍ ပညာရှိရာရောက်သည်။ dopaminergic ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ဤဓာတ်ခွဲခန်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောဆန့်ကျင်စွဲစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိသောရှုပ်ထွေးသော၊ စိတ်ရှုပ်စေသော dopamine agonist KB220Z ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။Blum, Chen က et al ။ , 2012) ။ Chen et al မှအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်းပါးတွင်အစီရင်ခံအဖြစ်။ (2011), KB220 မျိုးကွဲကြွက်များတွင် ဦး နှောက် enkephalin အဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်ရန်, C57 / BL ကြွက်တွေမှာအရက် - ရှာကြံအပြုအမူကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် pharmacogenetically ထိုကဲ့သို့သော DBA / 2J ကဲ့သို့ကြွက်၏အပြုအမူကိုအတုယူဖို့ကြွက်များကိုပိုမိုနှစ်သက်အတွက်အီသနောလက်ခံမှုပြောင်းလဲပြသခဲ့ကြသည်။
လူသားများတွင် KB220Z သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်ကိုထုတ်ယူသည့်လက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်အစီရင်ခံထားသည် စာရင်း (MMPI) ။ အုပ်စုကုထုံးရှိလူနာများသည်အရေပြားစီးဆင်းနှုန်းကိုတိုင်းတာ။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရမှတ်များသာမကအမူအကျင့်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ Detoxification အပြီးဆန့်ကျင်သောဆေးကုသမှုခံယူမှုဆန့်ကျင်မှုနှုန်း (AMA) နှုန်းခြောက်ဆကျဆင်းခြင်း၊ ရလဒ်များအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီအုပ်စုများသည် KB220 မျိုးကွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် KB300 အမျိုးအစားကိုသုံးလကြာပြီးနောက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အာရုံစိုက်မှု (E220 ကို အသုံးပြု၍ pXNUMX) ကိုပြသခဲ့ကြသည်။ အရက်သေစာ၊ ဘိန်းဖြူ၊ ကိုကင်းနှင့်နီကိုတင်းကိုအလွန်တရာလိုလိုလားလားရှိကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများလည်းရှိသည်။ ထို့အပြင်မသင့်လျော်သောလိင်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်များလျှော့ချခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလွန်သောစိတ်ဖိစီးမှု (PTSD) ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သော paraphilia ကဲ့သို့သောအစီရင်ခံချက်များတင်ပြထားသည်။McLaughlin et al ။ , 2013) ။ လူသားများတွင်အရေအတွက် electroencephalography (qEEG) လေ့လာချက်များက KB220Z သည် anta cingulate cortex တွင် theta power modulates ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီ။ abstinent ဘိန်းဖြူစွဲသူများသည်စမ်းသပ်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် KB220Z ပမာဏတစ်ခုတည်း (Blum, Chen, Chen, Rhoades, Prihoda, Down, Bagchi et al ။ , 2008) ကို N. Accumbens (NAc) ၏ activation အဖြစ် prefrontal-cerebellar-occipital အာရုံကြောကွန်ယက်၏ activation နှင့်တိုးတက်မှုအတွက်ရလဒ်။ ထို့အပြင် KB220Z ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းသည် Pearson ဆက်နွယ်မှုကို အသုံးပြု၍ DRD2 receptors ၏ပုံမှန်ချီးမွမ်းသယ်ဆောင်သူများအား DRD1 A2 allele နှင့်အတူအဝလွန်သောလူနာများတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။Blum, Chen, Chen, Rhoades, Prihoda, Down, Bagchi et al ။ , 2008) အနိမ့် dopamine function ကို KB220Z ကုသမှုနှင့်အတူပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုနှင့်အတူတန်းတူကြောင်းအကြံပြု။
RDS အတွက် Genomics နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ယန္တရားများ
၀ တ္ထုများနှင့် ၀ တ္ထုမဟုတ်သည့်အရာများ၊ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများ၏အခြေခံအာရုံကြောယန္တရားများနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတများစွာကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများပြုလုပ်နေသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည်နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါ၏ ဦး နှောက်တွင်အလုပ်လုပ်သောအာရုံကြောကွန်ယက်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သော Genomics ကွန်ယက်များတွင်ရှုပ်ထွေးမှုရှိကြောင်းသဘောပေါက်မှုအသစ်အပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ မျိုးဗီဇများသည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာကွန်ယက်များ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အာရုံကြောကွန်ယက်များ၏လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များကိုပုံဖော်။ ပင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။Colvis et al ။ , 2005) ။ မျိုးရိုးဗီဇနှင့် epigenomic အဆင့်ဆင့်တွင်မျိုးရိုးလိုက်သောယန္တရားများသို့မဟုတ်သဘာဝအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စော်ကားမှုများနှင့်ထိတွေ့မှုကြောင့်မျိုးရိုးဗီဇစည်းမျဉ်းဥပဒေကွန်ယက်များနှင့်ကျယ်ပြန့်သော ဦး နှောက်အာရုံကြောကွန်ယက်များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်လူ ဦး ရေစိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသောထိရောက်သောကုသမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ဤမျိုးရိုးဗီဇနှင့်အလုပ်လုပ်မှုအဆင့်များကိုပေါင်းကူးပေးသောကျိုးကြောင်းဆက်နွှယ်မှုမှာမရှိခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်း ၀ တ္ထုနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်းမရှိသောအလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) နည်းစနစ်များသည်နှေးကွေးသောထပ်တူပြုမှုလုပ်ဆောင်မှုကိုပြသထားသောအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသည့်ကွန်ယက်ပြည်နယ်များအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသော ဦး နှောက်၏အခိုင်အမာတည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုင်းတာခဲ့သည်။Biswal, ဗန် Kylen & Hyde, 1997) ။ အနားယူခြင်း၏နိုင်ငံတော်ဆက်သွယ်မှု (rsFC) သည်တရား ၀ င ်၍ တရားမ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အခြားအမျိုးမျိုးသောစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းမှုကိုလျှော့ချပေးသည်။လူး & Stein, 2014) ။ သဘာဝအားဖြင့် dopaminergic တိုးမြှင့်သည့် KB220Z ကို အသုံးပြု၍ စွဲစွဲနေသောလူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင် ဦး နှောက်ဆုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကွန်ယက်များပိုမို rsFC တိုးမြှင့်ခြင်းကိုပြသသည်။ RDS ဟုရည်ညွှန်းထားသော hypodopaminergic လုပ်ဆောင်မှုကိုပုံမှန်ဖြစ်စေရန်တီထွင်ထားသောအဆောက်အ ဦ တွင် ဦး နှောက်၏သဘာဝဆုလာဘ်ကက်စကိတ်အတွင်း neurotransmission တွင်ပါ ၀ င်သောတိကျသောကြားခံအဆင့်များကိုဖြည့်စွက်ရန်စီစဉ်ထားသည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။Blum, အော်စကာ - Berman et al ။ , 2012) ။ နောက်ခံမျိုးရိုးဗီဇကွန်ယက်များပြောင်းလဲပြီးအကျိုးရလဒ်စနစ်အတွင်းရှိ ဦး နှောက်၏အတွင်းပိုင်းဆက်သွယ်မှုကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်အခြေအနေများကို KB220Z ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဒြပ်ပေါင်းများဖြင့်စိစစ်။ ချိန်ညှိနိုင်သည်။
မြင့်မားသော Spatial-temporal resolution အလုပ်လုပ်သော ဦး နှောက်ပုံရိပ်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇစစ်ကြောရေးကိရိယာများကိုအသုံးပြုသောအခြေခံသိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်ချက်များအရဤအားကောင်းသောနည်းဗျူဟာကိုလူ့အသုံးချမှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အမေရိကန်နှင့်ပြည်ပရှိဓာတ်ခွဲခန်းများစွာသည် ဦး နှောက်အာရုံကြောလူ ဦး ရေနှင့်ရောဂါမော်ဒယ်လ်တို့၏အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဆန်းစစ်ရန် optogenetic tools များကိုစတင်အသုံးပြုနေစဉ်၊ Optogenetic လေ့လာမှုများတွင်မရှိခြင်းသည်မြင့်မားသောလယ်ကွင်းပုံရိပ်နှင့်ပူးတွဲပါ ၀ င်သည်။
ဤအချိန်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုကိုကြက်ဥပေါက်” ကြောင်းအလေးအနက်ဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်သောမေးခွန်းများကိုစတင်စပြုနေပြီး၊ ကမ္ဘာအနှံ့အဖြေရှာရန်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အားရကျေနပ်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ သို့မှသာဘီလီယံနှင့်ချီသောစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများနှင့်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်များတွင်စွဲစွဲလမ်းလမ်းဖြတ်သန်းလာသောအခါတစ်နေ့နေ့တွင် ၀ မ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုရှာတွေ့နိုင်လိမ့်မည်။ စွဲနှင့်နာကျင်မှုအခမဲ့။
Marcelo Febo သည် NIH ကိုလက်ခံရရှိသူဖြစ်သည် DA019946 နှင့် McKnight Brain Institute Foundation မှငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။ Kenneth Blum သည် FtEeFension Foundation မှ Ft ။ La Foundation မှ NY ဖောင်ဒေးရှင်းသို့သွားသည်။
ဆောင်းပါး၏ကန ဦး မူကြမ်းကို KB, MF နှင့် MSG တို့ကတီထွင်ခဲ့သည်။ TMcL, DH နှင့် FJC တို့ကပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်သိသာထင်ရှားသောအရေးအသားပြင်ဆင်မှုများနှင့်လက်တွေ့ပါဝင်မှုများပေးခဲ့သည်။ စာရေးသူသည်မာဂရက်အေမက်ဒီဂန်၏ကျွမ်းကျင်သောတည်းဖြတ်မှုများကိုတန်ဖိုးထားသည်။
Kenneth Blum သည်သူ၏ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော Synaptamine Inc. နှင့် KenBer LLC မှတစ်ဆင့် RDS ၏မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများအတွက်အမေရိကန်နှင့်နိုင်ငံခြားမူပိုင်ခွင့်အတော်များများကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ Kenneth Blum နှင့် David Han တို့သည် Dominion Diagnostics LLC သိပ္ပံအကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးလခပေးသောအတိုင်ပင်ခံများဖြစ်သည်။ Kenneth Blum နှင့် Mark Gold တို့သည် Malibu Beach Recovery Center မှအကြံပေးများဖြစ်သည်။ အခြားပconflictsိပက္ခများမရှိပါ။
Al-Eitan LN, Jaradat SA, Qin W. , Wildenauer DM, Wildenauer DD, Hulse GK, Tay GK ဝိသဗေဒနှင့်စက်မှုကျန်းမာရေး။ serotonin Transporter ဗီဇ (SLC2012A6) polymorphic နှင့်ဂျော်ဒန်အာရပ်လူ ဦး ရေအတွက်မူးယစ်ဆေးမှီခိုနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့၏4ခုနှစ်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ [PubMed]
Alks J. , Rask-Andersen M. , Chavan RA, Olszewski PK, Levine AS, Fredriksson R. , Schith HB မြင့်မားသောသကြားဓာတ်မြင့်မားသောသကြားဓာတ်သည်ထိတွေ့မှုသည် proopiomelanocortin ကိုပြင်းထန်စွာအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့် dopamine D1 နှင့် D2 receptor အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကွဲပြားစွာသက်ရောက်စေသည်။ ကြွက်များ၏ brainstem အတွက်ဗီဇစကားရပ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံပေးစာ။ 2014; 559: 18-23 ။ [PubMed]
Anitha အမ်၊ အာဗြဟံ PM၊ Paulose CS Striatal dopamine receptors များသည်ဆီးချိုကြွက်များတွင်အင်ဆူလင် receptor, IGF-1 နှင့် GLUT-3 တို့၏ဖော်ပြချက်ကို modulate: pyridoxine ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2012; 696 (1-3): 54-61 ။ [PubMed]
Ariza AJ၊ Hartman ဂျေ၊ Grodecki ဂျေ၊ Clavier အေ၊ Ghaey K. ၊ Elsner အမ်၊ Moore C. ၊ Reina OO, Binns HJ သည်ကလေးသူငယ်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအဝလွန်မှုစီမံချက်ကိုလူထုအစီအစဉ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့်အကာအကွယ်မဲ့သူများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဂျာနယ်။ 2013; 24 (2 ပျော့ပျောင်း): 158-167 ။ [PubMed]
Bakermans-Kranenburg MJ, van Ijzendoorn MH dopamine-related genes ပေါ် မူတည်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားမှု - သက်သေသစ်များနှင့် meta-analysis ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စိတ်ပညာ 2011;23(1):39–52. [PubMed]
Barratt DT, Coller JK၊ DRD2 A1 allele နှင့် methadone နှင့် buprenorphine ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုသမှုများအကြား Somogyi AA အသင်းအကြား။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျိုးရိုးဗီဇ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်အပိုင်း B: အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးရိုးဗီဇ၊ ၁၄၁ ဘီ (၄) 2006: 323-331 ။ [PubMed]
Beaver က KM, Belsky ဂျေ Gene- ပတ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန်နှင့်မိဘအုပ်ထိန်း၏မျိုးဆက်ဂီယာ: အ differential ကို - လွယ်ကူစွာထိခိုက်အယူအဆစမ်းသပ်ခြင်း။ စိတ်ရောဂါ Quaterly. 2012;83(1):29–40. [PubMed]
Berridge KC တိရိစ္ဆာန်နှင့်မွေးကင်းစအပေါ် hedonic သက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာခြင်း: အကျိုးသက်ရောက်သောအရသာဓာတ်ပြုမှုပုံစံများကိုဖွဲ့စည်းပုံ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ. 2000;24(2):173–198. [PubMed]
Biswal BB, van Kylen J. , Hyde JS တစ်ပြိုင်နက်တည်းစီးဆင်းမှုနှင့် BOLD အချက်ပြမှုများကိုအနားယူခြင်း - ပြည်နယ်၏ဆက်သွယ်မှုမြေပုံများတွင်အကဲဖြတ်သည်။ ဇီဝဆေးပညာအတွက် NMR. 1997;10(4–5):165–170. [PubMed]
“ စွဲလမ်းလွှဲပြောင်းမှု” ၏အဓိကအကြောင်းရင်းအဖြစ်ဆုလာဘ်ချို့တဲ့သောရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သောရွှေအမ် Neuro- မျိုးရိုးဗီဇ (Blum K. , Bailey J. , Gonzalez AM, Oscar-Berman M. , Liu Y, Giordano J. , Braverman E. , Gold M. Neuro-genetics) ": bariatric ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ဘုံဖြစ်ရပ်ဆန်းအသစ်။ မျိုးရိုးဗီဇ Syndrome နှင့် Gene ကုထုံး၏ဂျာနယ်. 2011;2012(1):S2–001. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Blum K. , Chen AL, Chen TJ, Rhoades P. , Prihoda TJ, Down BW, Waite RL, Williams L. , Braverman D. , Arcuri V. , Kerner M. , Blum SH, Palomo T. LG839: အဝလွန်ခြင်းကိုတားဆီး။ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ syndrome ရောဂါ၏ polymorphic ဗီဇဆက်စပ်။ ကုထုံးတိုးတက်မှု. 2008;25(9):894–913. [PubMed]
Blum K. ၊ Chen AL၊ Giordano ဂျေ၊ Borsten ဂျေ၊ Chen TJ၊ Hauser အမ်၊ Simpatico တီ၊ Femino ဂျေ၊ Braverman ER၊ Barh D. စွဲလမ်းစေသော ဦး နှောက်။ လမ်းအားလုံးသည် dopamine သို့ ဦး တည်သည်။ Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဂျာနယ်. 2012;44(2):134–143. [PubMed]
Blum K. ၊ Chen TJH, Chen ALC, Rhoades P. , Prihoda TJ, Down BW, Bagchi D. , Bagchi အမ်, Blum SH, Williams L. , Braverman ER, Kerner M. , Waite RL, Quirk B. , White L, Reinking J. Dopamine D2 receptor Taq A1 allele သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိစမ်းသပ်လေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင် LG839 ၏ကုသမှုလိုက်နာမှုကိုခန့်မှန်းသည်။ မျိုးရိုးဗီဇကုထုံးနှင့်မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ။ 2008; 12: 129-140 ။
Reward Deficiency Syndrome (RDS) နှင့်ဆက်စပ်သော Gold M. “ Liking” နှင့်“ wanting”: ဦး နှောက်ဆုအတွက်တိုက်နယ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောတုန့်ပြန်မှုကိုတွက်ချက်ခြင်း။ လက်ရှိဆေးဝါးဒီဇိုင်း. 2012;18(1):113–118. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Blum K. , Noble EP, Sheridan PJ, Montgomery အေ, Ritchie T. , Jagadeeswaran P. , Nogami အိပ်ချ်, Briggs A. H, Cohn JB Allelic အသည်းအသန်လူ့ dopamine D2 အဲဒီ receptor gene ။ ဂျေအေအမ်အေ. 1990;263(15):2055–2060. [PubMed]
schizophrenia နှင့်အမူအကျင့်ရှာသောပစ္စည်းဥစ္စာများရှိ dopaminergic မျိုးရိုးဗီဇ antecedents ကို Blum K. , Oscar-Berman အမ်၊ Badgaiyan RD, Palomo T. , Gold MS ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာယူဆချက်. 2014;82(5):606–614. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Blum K. , Oscar-Berman အမ်, Stuller E. , Miller D. , Giordano J. , Morse S. , McCormick L. , Down WB, Waite RL, Barh D. , Neal D. , Braverman ER, Lohmann R. , Borsten ဂျေ, Hauser အမ်, ဟန် D. , လျူ Y. , Helman အမ်, Simpatico တီ Neurogenetics နှင့် Reward ချို့တဲ့ Syndrome (RDS) အတွက်အာရုံကြော - အာဟာရကုထုံး၏ nutrigenomics: မော်လီကျူး neurobiological ယန္တရားများ၏ function ကိုအဖြစ်လက်တွေ့ဖုံးကွယ်။ စွဲလမ်းမှုသုတေသနနှင့်ကုထုံး၏ဂျာနယ်။ 2012 ခုနှစ်,3(5): 139 .. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဆုကိုချို့တဲ့ syndrome ရောဂါ၏အဆုံးအဖြတ်အဖြစ် Blum K. , Sheridan PJ, Wood က RC, Braverman ER, Chen က TJ, Cull JG, DE အဆိုပါ D2 dopamine အဲဒီ receptor ဗီဇ။ ဆေးပညာ၏တော်ဝင် Society ၏ဂျာနယ်. 1996;89(7):396–400. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Brownell KD ရှေ့ဆက်စဉ်းစား - စားနပ်ရိက္ခာလုပ်ငန်းကိုနှစ်သက်စေတဲ့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်း။ PLoS ဆေးပညာ။ 2012;9(7): e1001254 .. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cameron JD, Riou ME, Tesson F. , Goldfield GS, Rabasa-Lhoret R. , Brochu MC, Doucet အဆိုပါ TaqIA RFLP သည်သွေးကြောများမှ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သောခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်သွေးဆုံးပြီးအဝလွန်သောအမျိုးသမီးများတွင်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်စားသုံးမှုတိုးလာမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အလိုဆန္ဒ. 2013;60(1):111–116. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လက်သမား CL, Wong AM, Li Z. , Noble EP, dopamine D2 receptor နှင့် Hept D. Association of Clinical ပြင်းထန်သောအဝလွန်ခြင်းရှိသည့် leptin receptor ဗီဇများ။ အဝလွန်ခြင်း (Silver, နွေဦး) 2013;21(9):E467–473. [PubMed]
Chen KC၊ Lin YC၊ Chao WC, Chung HK, Chi SS, Liu WS, glutamate decarboxylase2၏မျိုးရိုးဗီဇပိုလီမာဖီများနှင့်ဝူ WT အသင်းနှင့်ထိုင်ဝမ်ဘာသာရပ်များတွင်အဝလွန်ခြင်းရှိ dopamine D2 receptor ။ ဆော်ဒီဆေးပညာရာဇဝင်. 2012;32(2):121–126. [PubMed]
Chen PS၊ Yang YK၊ Yeh TL၊ Lee IH၊ Yao WJ၊ Chiu NT၊ Lu RB ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများတွင်ကိုယ်ခန္ဓာအညွှန်းကိန်းနှင့် striatal dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကြားဆက်စပ်မှု - SPECT လေ့လာမှု။ Neuroimage 40 (1) 2008: 275-279 ။ [PubMed]
Chen TJ၊ Blum K. ၊ Chen AL, Bowirrat အေ, Down WB, Madigan MA, Waite RL, Bailey JA, Kerner M. , Yeldandi S. , Majmundar N. , Giordano J. , Morse S. , Miller D. , Fornari အက်ဖ်၊ Braverman ER Neurogenetics နှင့် neuroadaptagen မှ ဦး နှောက်ဆုချီးမြှင့်မှု circuit ၏ putative activation အတွက်လက်တွေ့အထောက်အထား။ Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဂျာနယ်. 2011;43(2):108–127. [PubMed]
Clarke TK, Weiss AR, Ferarro TN, Kampman KM, Dackis CA, Pettinati HM, OBrien CP, Oslin DW, Lohoff FW, Berrettini WH အဆိုပါ dopamine receptor D2 (DRD2) SNP rs1076560 သည် opioid စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လူ့မျိုးရိုးဗီဇ၏ရာဇဝင်. 2014;78(1):33–39. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Colvis CM, Pollock JD, Goodman RH, Impey S. , Dunn J. , Mandel G. , Champagne FA, Mayford အမ်, Korzus အီး, Kumar A. , Renthal W. , Theobald DEH, Nestler EJ Epigeneticism ယန္တရားများနှင့်ဗီဇကွန်ယက်များ အာရုံကြောစနစ်၌တည်၏။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်. 2005;25(45):10379–10389. [PubMed]
Connor JP, Young RM, Lawford BR, Ritchie TL, Noble EP D (2) dopamine receptor (DRD2) polymorphic သည်အရက်အလွန်အကျွံမှီခိုမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဥရောပစိတ်ရောဂါကုသမှု. 2002;17(1):17–23. [PubMed]
ဆယ်ကျော်သက်များအကြားပုံမှန်အရက်သောက်သုံးခြင်းနှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ Creemers HE၊ Harakeh Z. , Dick DM၊ Meyers J. ၊ Vollebergh WA, Ormel J. , Verhulst FC, Huizink AC DRD2 နှင့် DRD4 - မျိုးရိုးဗီဇထိခိုက်လွယ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပါသလား။ လမ်းကြောင်းလေ့လာမှု။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်. 2011;115(1–2):35–42. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Danilovich N. , Mastrandrea LD, Cataldi L. , Quattrin T. Methylphenidate အဝလွန်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အဆီနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်စားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ အဝလွန်ခြင်း (Silver, နွေဦး) 2014;22(3):781–785. [PubMed]
Demetrovics Z. , Griffiths MD အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု - အတိတ်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်. 2012;1(1):1–2.
Dunn JP, Cowan RL, Volkow ND, Feurer ID၊ Li R. , Williams DB, Kessler R. M, Abumrad NN Bariatric ခွဲစိတ်မှုအပြီးတွင် dopamine အမျိုးအစား2receptor ရရှိနိုင်မှုကိုလျော့ချခဲ့သည်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 2010; 1350: 123-130 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Eisenstein SA, Antenor-Dorsey JA, Gredysa DM, Koller JM, Bihun EC, Ranck SA, Arbeláez AM, Klein S. , Perlmutter JS, Moerlein SM, Black KJ, Hershey T. အဝလွန်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်စည်းနှောင်ခြင်းများတွင် D2 receptor တိကျတဲ့စည်းနှောင်မှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း (ပေ - N ([11) C] methy1) benperidol နှင့်အတူ PET ကိုအသုံးပြုသောလူတစ် ဦး ချင်းစီ။ synapses. 2013;67(11):748–756. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Eny KM၊ Corey PN၊ El-Sohemy အေ Dopamine D2 receptor genotype (C957T) နှင့်သန္ဓေသားလောင်းများအားလွတ်လပ်စွာနေထိုင်သောလူ ဦး ရေတွင်စားသုံးခြင်း။ Nutrigenetics နှင့် Nutrigenomics ၏ဂျာနယ်. 2009;2(4–5):235–242. [PubMed]
ယခုခေတ် Epstein LH, Paluch RA, Roemmich JN, Beecher MD မိသားစုအခြေပြုအဝလွန်မှု - ကလေး ၂၅ နှစ်ကလေးအဝလွန်ခြင်းကုသမှု။ ကနျြးမာရေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်. 2007;26(4):381–391. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Epstein LH၊ Temple JL, Neaderhiser BJ, Salis RJ, Erbe RW, Leddy JJ စားနပ်ရိက္ခာသည်အ ၀ လွန်နှင့်လူမဟုတ်သောလူများတွင် dopamine D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ. 2007;121(5):877–886. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဖန် YJ, သောမတ်စ် GN, Xu ZL, ဖန် JQ, Critchley JA, Tomlinson ခ dopamine D2 အဲဒီ receptor ဗီဇ TaqI polymorphic နှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်သွေးတိုးရောဂါအကြားဆက်သွယ်မှု၏ထိခိုက် pedigree အဖွဲ့ဝင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ နှလုံးရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်. 2005;102(1):111–116. [PubMed]
serotonergic နှင့် dopaminergic လုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသော Fuemmeler BF, Agurs-Collins TD, McClernon FJ, Kollins SH, Kail ME, Bergen AW, Ashley-Koch AE မျိုးဗီဇများသည် BMI အမျိုးအစားကိုခန့်မှန်းသည်။ အဝလွန်ခြင်း (Silver, နွေဦး) 2008;16(2):348–355. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gold MS, Avena NM တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များသည်အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုကိုပိုမိုနားလည်ရန်နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲရာတွင်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုသောဆေးဝါးများသည်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကိုကုသရာတွင်အောင်မြင်နိုင်သည်ဟုသက်သေပြသည်။ ဟားဗတ်။ 2013; 74 (7): e11 .. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gold MS, Blum K. , Oscar-Berman အမ်၊ Braverman ER အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါရှိ dopamine လုပ်ဆောင်ချက် - genotype သည်ကလေးများအားစောစောစီးစီးရောဂါလက္ခဏာပြသင့်သလား။ ဘွဲ့လွန်ဆေးပညာ. 2014;126(24393762):153–177. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Grzywacz အေ, Kucharska-Mazur ဂျေ, Samochowiec ဂျေ [အရက်မှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက် dopamine D4 အဲဒီ receptor ဗီဇ exon3၏အသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုများ] စိတ်ရောဂါကုသမှု Polska(ပိုလန်အတွက်) 2008; 42 (3): 453-461 ။ [PubMed]
Gyollai အေ, Griffiths က MD, Barta ။ C. , Vereczkei အေ, Urban R. , Kun B. , Kokonyei G. အ, Szekely A. , Sasvari-Szekely အမ်, Blum K. , Demetrovics Z. ပြproblemနာနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၏မျိုးရိုးဗီဇ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လက်ရှိဆေးဝါးဒီဇိုင်း. 2014;20(25):3993–3999. [PubMed]
Hess ME၊ Hess အက်စ်၊ Meyer KD၊ Verhagen LA၊ Koch L. , Brnneke HS, Dietrich MO, ဂျော်ဒန် SD, Saletore Y. , Elemento O. , Belgardt BF, Franz T. , Horvath TL, Rüther U. , Jaffrey SR , Kloppenburg P. , Brüning JC အဆိုပါအဆီအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့်အဝလွန်ခြင်းဆက်စပ်ဗီဇ (Fto) က dopaminergic midbrain circuit ၏လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းညှိ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ. 2013;16(8):1042–1048. [PubMed]
Hettinger JA, Liu X၊ Hudson ML, Lee A. , Cohen IL, Michaelis RC, Schwartz CE, Lewis SM, Holden JJ အမူအကျင့်များနှင့်ဦးနှောက် Functions များ။ DRD2012 နှင့် PPPIRIB (DARPP-2) polymorphic များသည်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောဂါပြန့်ပွားမှုအတွက်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ခြင်းကိုသီးခြားလွတ်လပ်စွာအပ်နှင်းပြီးအမျိုးသားများသာသက်ရောက်သည့် sib-pair မိသားစုများတွင်ဘေးဒဏ်သင့်အခြေအနေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊ စစ။ 32-18 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hone-Blanchet အေ၊ Fecteau S. အစားအစာစွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာပြOverနာများအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် - တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများအားသုံးသပ်ခြင်း။ Neuropharmacology 85C။ 2014: 81-90 ။ [PubMed]
Hou QF၊ လီ SB အလားအလာရှိသောအသင်းအဖွဲ့နှင့်ဘိန်းဖြူမှီခိုမှုနှင့် DAT2 မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှု။ neuroscience ပေးစာ. 2009;464(2):127–130. [PubMed]
Huang XF, Yu Y. , Zavitsanou K. , Han M. , dopamine D2 နှင့် D4 receptor နှင့် tyrosine hydroxylase mRNA တို့၏ Storlien L. ၏ကွဲပြားခြားနားသောဖော်ပြချက်သည်ကြွက်များတွင်ကျရောက်သောသို့မဟုတ်နာတာရှည်အဆီဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားသောအဝလွန်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ မော်လီကျူးဦးနှောက်သုတေသန. 2005;135(1–2):150–161. [PubMed]
Huertas E. , Ponce G. အ၊ Koeneke MA၊ Poch C. , Espana-Serrano L. , Palomo T. , Jiménez-Arriero MA, Hoenicka J. D2 dopamine receptor ဗီဇမျိုးကွဲ C957T သည်လူ၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုအေးစက်စေခြင်းနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သောအချက်များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ မျိုးဗီဇ ဦး နှောက်နှင့်အပြုအမူ. 2010;9(1):103–109. [PubMed]
Jablonski အမ် [အရက်မှီခိုခြင်းလက္ခဏာ၏မျိုးရိုးဗီဇဆုံးအဖွတျ: အရက်စွဲနှင့်အတူမိသားစုများအတွက်ချိုမြိန်အကြိုက်နှင့်ဆက်စပ်သော endophenotype ရှာဖွေခြင်း] ။ Annales Academiae Medicae Stetinensis ဖြစ်သည်။ 2011; 57 (1): 79-87 ။ [PubMed]
opiate အလွဲသုံးစားမှုနှင့် striatal စကားရပ်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဆက်စပ် Jacobs MM, Okvist အေ, Horvath အမ်, Keller အီး, Bannon MJ, Morgello အက်စ်, Hurd YL Dopamine အဲဒီ receptor D1 နှင့် postsynaptic သိပ်သည်းဆဗီဇမူကွဲ။ Molecular Psychiatry။ 2013; 18 (11): 1205-1210 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Jutras-Aswad,၊ Jacobs MM, Yiannoulos G. , Roussos P. , Bitsios P. , Nomura Y. , Liu X. , Hurd YL ဆေးခြောက် - မှီခိုမှုအန္တရာယ်သည် neuroticism နှင့် amygdala gene gene expression နှင့်ဆက်စပ်သော proenkephalin SNP များအကြား Synergism နှင့်ဆက်စပ်သည်။ Case - ထိန်းချုပ်မှုလေ့လာမှု။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2012;7(6): e39243 .. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kessler RM, Zald DH, Ansari MS, Li R. , Cowan RL အပြာရောင်အဝလွန်ခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် dopamine D2 /3receptor level ပြောင်းလဲမှုများ။ synapses။ 2014; 68 (7): 317-320 ။ [PubMed]
Lee YH, Yeh TL, Yang YK, Lu RB၊ အသစ်တီထွင်မှုရှာဖွေခြင်းနှင့် aldehyde dehy drogenrogenase2gene များအကြားအသစ်အဆန်းရှာဖွေမှုနှင့် aldehyde dehy drogenase XNUMX ဗီဇတို့အကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု Lee Lee, Wang TY, Chen SL, Huang SY, Tzeng NS၊ Chang YH၊ လူနာများ။ လက်တွေ့ Psychopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2013;33(3):386–390. [PubMed]
လီ C.-Y. , Mao X. , ဝေအယ်ဗီဇနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏အခြေခံ (ဘုံ) လမ်းကြောင်းများ။ PLoS တွက်ချက်ဇီဝဗေဒ။ 2008;4(1) ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Li MD, Ma JZ, Beuten J. တိုးတက်မှုသည်ဆေးလိပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူအတွက်ဖြစ်ပေါ်လွယ်လွယ်သောနေရာများနှင့်မျိုးဗီဇများကိုရှာဖွေခြင်း။ လက်တွေ့မျိုးရိုးဗီဇ. 2004;66(5):382–392. [PubMed]
လူးအိပ်ချ်, Stein EA အနားယူခြင်းပြည်နယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု: ၎င်း၏ neuropharmacology အတွက်၎င်း၏ဇီဝကမ္မအခြေခံနှင့်လျှောက်လွှာ။ Neuropharmacology 84C။ 2014: 79-89 ။ [PubMed]
Masarik AS, Conger RD, Donnellan MB, Stallings MC, Martin MJ, Schofield TJ, Neppl TK, Scaramelly LV, Smolen A. , Widaman KF ပိုကောင်းသောနှင့်ပိုဆိုးရန်အတွက်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်မိဘများအနေဖြင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်ပတ်သက်သောအနာဂတ်အပြုအမူများကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ရန်။ မိသားစုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်. 2014;28(3):357–367. [PubMed]
McLaughlin T. , Oscar-Berman အမ်, Simpatico T. , Giordano ဂျေ၊ ဂျုံးစ်အက်စ်၊ Barh,၊ Down WB, Waite RL, Madigan အမ်, Dushaj K. , Lohmann R. , Braverman ER, Han D. , Blum K. KB220Z-nutrigenomic aminoacid ကုထုံး (NAAT) နှင့်အလျင်အမြန်လက်တွေ့ attenuation ရှိခြင်းဆေးဝါးအလင်းယိုင် Tourette ရဲ့ရောဂါလူနာ၏ထပ်တလဲလဲ paraphilia အပြုအမူ Hypothesizing ။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်။ 2013; 2: 117-124 ။
Mills-Koonce WR, Propper CB, Gariepy JL, Blair C. , Garrett-Peters P. , Cox MJ ဘက်လိုက်သောမျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်လွှမ်းမိုးမှုမိခင်နှင့်ကလေးအပြုအမူ - မိသားစုစနစ်သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ယူနစ်ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် Psychopathology။ 2007; 19 (4): 1073-1087 ။ [PubMed]
Munafo MR, Matheson IJ, DRD2 ဗီဇ Taq1A polymorphic and alcoholism ၏ Flint J. J. Association: အမှု - ထိန်းချုပ်မှုလေ့လာမှုများနှင့်ထုတ်ဝေဘက်လိုက်မှု၏သက်သေအထောက်အထားများတစ် Meta-analysis သည်။ Molecular Psychiatry။ 2007; 12 (5): 454-461 ။ [PubMed]
လိုအပ်သည် AC, Ahmadi KR, Spector TD, Goldstein DB Obesity သည် dopamine ရရှိနိုင်မှုကိုပြောင်းလဲစေသောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာမျိုးကွဲများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လူ့မျိုးရိုးဗီဇ၏ရာဇဝင်။ 2006; 70 (Pt 3): 293-303 ။ [PubMed]
Nisoli E. , Brunani အေ၊ Borgomainerio အီး, Tonello C. , Dioni L. , Briscini L. , Redaelly G. အ, Molinary E. , Cavagnini အက်ဖ်, Carruba MO D2 dopamine receptor (DRD2) ဗီဇ Taq1A ပိုလီမော့ဖနှင့်အစာစားခြင်း - အစာစားခြင်းမမှန်ခြင်း (anorexia nervosa နှင့် bulimia) နှင့်အဝလွန်ခြင်းတို့တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ။ စားနှင့်အလေးချိန် Disorders။ 2007; 12 (2): 91-96 ။ [PubMed]
Noble EP, Gottschalk LA, Fallon JH, Ritchie TL, Wu JC D2 dopamine receptor polymorphic နှင့် ဦး နှောက်ဒေသတွင်းဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်စဉ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျိုးရိုးဗီဇ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1997; 74 (2): 162-166 ။ [PubMed]
dopamine receptor2TaqIA polymorphic များနှင့်လူမျိုးစုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအကြားအမိုင်မိုအမ်၊ Sakaishi K. ၊ Hama အေ၊ Morita အေ၊ Nomura အမ်၊ Mitsumoto Y. အသင်း - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် meta-analysis update ။ နီကိုတင်းနှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုတေသန. 2013;15(3):633–642. [PubMed]
Pato CN၊ Macciardi အက်ဖ်၊ ပါတို MT၊ ဗergaအမ်၊ ကနေဒီ JL ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက် dopamine D2 receptor နှင့် alkohol: A meta-analysis ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျိုးရိုးဗီဇ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်. 1993;48(2):78–82. [PubMed]
Pecina အမ်၊ Mickey BJ၊ Love T. ၊ ဝမ်အိပ်ချ်၊ Langenecker SA၊ Hodgkinson C. , Shen PH၊ Villafuerte အက်စ်၊ Hsu D. ၊ Weisenbach SL၊ dopamine neurotransmission နှင့်ခံစားမှုကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှု။ cortex. 2013;49(3):877–890. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pinto အီး, Reggers ဂျေ, Gorwood P. , Boni C. , Scantamburlo G. အ, Pitchot ဒဗလျူ, Ansseau အမ်အမျိုးအစား II အရက်မှီခိုအတွက် TaqI တစ် ဦး DRD2 polymorphic: စတင်ခြင်းသို့မဟုတ်မိသားစုရောဂါအသက်အရွယ်တစ်အမှတ်အသား? အရက်။ 2009; 43 (4): 271-275 ။ [PubMed]
DRD1 မျိုးဗီဇ၏ A2 allele (TaqI A polymorphisms) သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆိုင်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးအရက်သေစာနမူနာတွင် Ponce G. , Jimenez-Arriero MA၊ Rubio G. ၊ Hoenicka J. , Ampuero I. , Ramos JA, Palomo T. မှီခိုလူနာ။ ဥရောပစိတ်ရောဂါကုသမှု. 2003;18(7):356–360. [PubMed]
Roussotte FF၊ Jahanshad N. , Hibar DP, Thompson PM နှင့် Alzheimer ရောဂါအတွက် Neuroimaging ၁။ သက်ကြီးရွယ်အိုများသယ်ဆောင်သူများ၏ဒေသတွင်း ဦး နှောက်ပမာဏသည် dopamine D2 receptor gene (မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု) အတွက်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးအတွက် DRD2 ပြောင်းလဲမှု။ ဦးနှောက် Imaging နှင့်အပြုအမူ။ 2014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Midkain dopamine D2 / D3 အချက်ပြမှုနှင့် ghrelin တို့မှအသစ်ရှာဖွေသော Savage SW, Zald DH, Cowan RL, Volkow ND, Marks-Shulman PA၊ အဝလွန်ခြင်း (Silver, နွေဦး) 2014;22 (6):1452–1457. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Schuck K. , Otten R. , Engels RC, Kleinjan M. ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတွင်နီကိုတင်း၏ပထမဆုံးဆေးကိုကန ဦး တုံ့ပြန်မှုများ - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ထိတွေ့မှု၏အခန်းကဏ္။ ။ စိတ်ပညာနှင့်ကျန်းမာရေး. 2014;29(6):698–716. [PubMed]
Shah NR, Braverman ER တိုင်းတာမှုအတွင်းလူနာများကိုတိုင်းတာခြင်း - ကိုယ်ခန္ဓာအဆီအညွှန်းကိန်း (BMI) ၏ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းရာခိုင်နှုန်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အဆီဓာတ်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2012;7(4): e33308 .. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sikora အမ်၊ Gese A. ၊ Czypicki R. , Gasior အမ်, Tretyn အေ, Chojnowski ဂျေ, Bielinski အမ်, Jaracz အမ်, Kaminska အေ, Junik R. , Borkowska အေဆက်စပ်မှုဒြပ်စင်မျိုးဗီဇအတွက် polymorphisms အကြားဆက်စပ်မှု အဝလွန်နှင့်အဝလွန်အမျိုးသမီးတွေအတွက် dopaminergic လမ်းကြောင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအစုလိုက်အပြုံလိုက်အညွှန်းကိန်း၏။ Endokrynologia Polska. 2013;64(2):101–107. [PubMed]
Smith L. , Watson အမ်၊ ဂိတ်စ်အက်စ်၊ Ball,၊ Foxcroft or Meta-analysis သည်အရက်မှီခိုမှုအန္တရာယ်နှင့်အတူ Taq1A polymorphic ၏အသင်းအဖွဲ့၏ Meta-analysis: HuGE gene-disease Association Association review ။ ကူးစက်ရောဂါ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်. 2008;167(2):125–138. [PubMed]
Spangler R. , Wittkowski KM, Goddard NL, Avena NM, Hoebel BG, Leibowitz SF Opiate ကဲ့သို့သောသကြား ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ဒေသများရှိမျိုးဗီဇဖော်ပြမှုအပေါ်သကြားဓာတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ မော်လီကျူးဦးနှောက်သုတေသန။ 2004; 124 (2): 134-142 ။ [PubMed]
Stekop KE, Prokopowicz GP, Schweitzer MA, Magunsuon TH, Lidor AO, Kuwabawa H. , Kumar A. , Brasic J. , Wong DF အစာအိမ်ရှောင်ကွင်းခွဲစိတ်မှုမတိုင်မှီနှင့်အပြီးတွင်ဗဟို dopamine receptors ၏ပြောင်းလဲမှုများ။ အဝလွန်ခြင်းခွဲစိတ်ကုသ။ 2010; 20 (3): 369-374 ။ [PubMed]
Stice အီး၊ လူသားများတွင် dopaminergic ဆုအတွက် Dagher A. မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှု။ အာဟာရဖိုရမ်။ 2010; 63: 176-185 ။ [PubMed]
Stice E. , Davis K. , Miller NP, Marti CN Fasting အရက်အလွန်အကျွံစားခြင်းနှင့် bulimic ရောဂါဗေဒအန္တရာယ်များတိုးစေသည်။ ၅ နှစ်တာလေ့လာမှုတစ်ခု။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2008; 117 (4): 941-946 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Stice အီး၊ Spoor အက်စ်၊ Bohon C၊ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစားအစာကိုမတည့်သော striatal တုန့်ပြန်မှုအကြားအသေးစား DM ဆက်စပ်မှု TaqIA A1 allele ကတည်းဖြတ်သည်။ သိပ္ပံ. 2008;322(5900):449–452. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Stices အီး၊ Spoor အက်စ်၊ Bohon C၊ Veldhuizen MG၊ အစားအစာစားသုံးမှုမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးအသေးစား DM ဆက်ဆံရေးနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက်မျှော်မှန်းထားသောအစားအစာစားသုံးမှု - အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်. 2008;117(4):924–935. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Stice E. , Yokum အက်စ်၊ Blum K. ၊ Bohon C. ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းသည်အာဟာရပြည့်ဝသောအစားအစာများအားကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များတုန့်ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2010; 30 (39): 13105-13109 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အစားအစာနှင့်ပတ်သက်သောတိုက်နယ်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုတုန့်ပြန်မှု Stice E. , Yokum အက်စ်၊ Bohon C၊ Marti N. ၊ Smolen အေ။ Neuroimage။ 2010; 50 (4): 1618-1625 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
dopamine အချက်ပြစွမ်းရည်ကိုထင်ဟပ်စေသည့် Stice E. , Yokum အက်စ်၊ ဘာဂါကေ၊ Epstein L. ၊ Smolen အေ Multilocus မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပေါင်းစပ်မှုသည်ဆုလာဘ်တိုက်ဖျက်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုခန့်မှန်းသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်. 2012;32(29):10093–10100. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Stice အီး, Yokum အက်စ်, Zald D. , Dagher အေ Dopamine-based ဆုလာဘ် circuitry တုံ့ပြန်မှုမျိုးရိုးဗီဇနှင့် overeating ။ အပြုအမူအာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်လက်ရှိခေါင်းစဉ်။ 2011; 6: 81-93 ။ [PubMed]
Sullivan D. ၊ Pinsonneault JK, Papp AC, Zhu H. , Lemeshow S. , Mash DC, Sadee W. Dopamine Transporter DAT နှင့် receptor DRD2 မျိုးကွဲများသည်သေစေနိုင်သောကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှု၏အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ Translational စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 20133Doi: 10.1038 / tp.2012.146 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Suraj Singh ကအိပ်ချ်၊ Ghosh PK၊ Saraswathy KN DRD2 နှင့် ANKK1 မျိုးဗီဇပိုလီမာဖီနှင့်အရက်သေစာမှီခိုမှု - အရှေ့အာရှမျိုးနွယ်စု၏ Mendelian လူ ဦး ရေအကြားတွင်ရောဂါထိန်းချုပ်မှုလေ့လာချက်။ အရက်နှင့်အရက်. 2013;48(4):409–414. [PubMed]
Thomsen G. ၊ Ziebell အမ်၊ Jensen PS၊ da Cuhna-Bang အက်စ်၊ Knudsen GM၊ Pinborg LH SPECT နှင့် [123I] PE2I ကို အသုံးပြု၍ ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်အညွှန်းကိန်းနှင့် striatal dopamine Transporter များအကြားဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ အဝလွန်ခြင်း (Silver, နွေဦး) 2013;21 (9):1803–1806. [PubMed]
Tomasi D. , စွဲခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက် Volkow ND Striatocortical လမ်းကြောင်းကမောက်ကမဖြစ်မှု: ခြားနားချက်များနှင့်တူညီ။ Biochemsitry နှင့်မော်လီကျူးဇီဝဗေဒအတွက်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်. 2013;48(1):1–19. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Trifilieff P. , Feng B. , Urizar E. , Winiger V. , Ward RD, Taylor KM, Martinez D. , Moore H. , Balsam PD, Simpson EH, Javitch JA အရွယ်ရောက်ပြီးသူနျူကလိယ၌ dopamine D2 receptor expression ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးစေသည် ။ Molecular Psychiatry. 2013;18(9):1025–1033. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tsuchida အိပ်ချ်, Nishimura ဗြဲ, Fukui K. [အရက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို] ။ ဦး နှောက်အာရုံကြော။ 2012; 64 (2): 163-173 ။ (ဂျပန်ဘာသာဖြင့်)PubMed]
Valmon A. , Holst SC, Bachmann V. , Viola AU, Schmidt C. , Zürcher J. , Berger W. , Cajochen C. , DAT1 ၏ Landolt HP မျိုးဗီဇပိုလီမာဖီနှင့် COMT သည် actigraphy မှဆင်းသက်လာသည့်အိပ်စက်ခြင်းစက်ဝန်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အရွယ်ရောက်သူ။ Chronobiology အင်တာနေရှင်နယ်. 2014;31(5):705–714. [PubMed]
Vaske ဂျေ၊ Makarios အမ်၊ Boisvert Be၊ Beaver KM, Wright JP DRD2 နှင့်အကြမ်းဖက်မှုခံရသူများကိုစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ဆက်ဆံခြင်း။ ကျား၊ မ၊ အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorders ၏ဂျာနယ်။ 2009; 112 (1-3): 120-125 ။ [PubMed]
Vereczkei A. ၊ Demetrovics Z. , Szekely A. , Sarkozy P. , Antal P. , Szilagyi A. , Sasvari-Szekely အမ်, Barta C. dopaminergic gene မျိုးကွဲအမျိုးမျိုးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ဘိန်းဖြူမှီခိုမှု၏အန္တရာယ်အချက်များဖြစ်သည်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2013; 8 (6): e66592 .. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Volkow ND, Wang GJ, Telang F. , Fowler JS, Goldstein RZ, Alia-Klein N. , Logan J. , Wong C. , Thanos PK, Ma Y. , Pradhan K. BMI နှင့်ကျန်းမာသော prefrontal ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုအကြားပြောင်းပြန်ဆက်စပ်မှု အရွယ်ရောက်သူ။ အဝလွန်ခြင်း (Silver, နွေဦး) 2009;17 (1):60–65. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဝမ်ဂျီ၊ ဝူဂျေ၊ ဂျူယီ၊ လီအက်စ်လူမျိုးတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အန္တရာယ်အချက်များကွဲပြားမှု - တရုတ်နှင့်အဖြူဘာသာရပ်လေ့လာခြင်း တရုတ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောအထီး။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2011;6(5): e19835 .. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဝမ်အက်ဖ်၊ Simen အေ၊ Arias အေ၊ လူး QW၊ ANZK1 / DRD2 Taq1A polymorphism နှင့်အရက်သေစာမှီခိုမှုအကြားဆက်စပ်မှုကိုအကြီးစား Meta-analysis ၏အကြီးစား Meta-analysis သည်။ လူ့မျိုးရိုးဗီဇ. 2013;132(3):347–358. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wang L. , Liu X. , Luo X. , Zeng အမ်၊ Zuo L. , Wang KS မျိုးရိုးဗီဇမျိုးကွဲများနှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော (FTO) မျိုးရိုးဗီဇသည်အရက်မှီခိုမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ မော်လီကျူးအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2013; 51 (2): 416-424 ။ [PubMed]
Wang TY၊ Lee SY၊ Chen SL၊ Huang SY၊ Chang YH၊ Tzeng NS၊ ဝမ် CL၊ Hui Lee I. ၊ Y TL, Yang YK၊ Lu RB အသင်းမှ DRD2 5-HTTLPR နှင့် ALDH2 မျိုးရိုးဗီဇများအကြားနှင့်အရက်သေစာဆိုင်ရာအထူးစရိုက်များ။ နှင့် opiate- မှီခိုလူနာ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2013; 250: 285-292 ။ [PubMed]
Whitmer AJ၊ Gotlib IH Depressive Rumination နှင့် DRD957 ဗီဇ၏ C2T ပိုလီမာဖီ။ သိမှုထိရောက်သော & အပြုအမူအာရုံကြောသိပ္ပံ. 2012;12(4):741–747. [PubMed]
Willuhn I. , Burgeno LM, Groblewski PA, Phillips PE အလွန်အမင်းကိုကင်းသုံးစွဲမှုသည် striatum တွင် phasic dopamine အချက်ပြမှု၏ရလဒ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ. 2014;17(5):704–709. [PubMed]
Dopamine D2 receptor ဗီဇတွင် Winkler JK၊ Woehning အေ၊ Schultz JH, Brune M. , Beaton N. , Challa TD, Minkova S. , Roeder E. , Nawroth PP, Friederich HC, Wolfrum C. , Rudofsky G. TaqIA ပိုလီဖော့စဖိတ် ငယ်ရွယ်သောအဝလွန်လူနာများအတွက်အလေးချိန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ အစာအာဟာရ။ 2012; 28 (10): 996-1001 ။ [PubMed]
Xu K. , Lichtermann,, Lipsky RH, Frank P. , Liu X. , Hu Y. , Cao L. , Schwab စင်ကာပူဒေါ်လာ, Wildenauer DB, Bau CH, Ferro အီး, Astor ဒဗလျူ, Finch တီ, တယ်ရီ J ကို2ကွဲပြားလူ ဦး ရေအတွက်ဘိန်းဖြူမှီခိုအားနည်းချက်နှင့်အတူ D2 dopamine အဲဒီ receptor ဗီဇ၏တိကျသော haplotypes ၏။ , Taubman ဂျေ, Maier ဒဗလျူ, Goldman D. အသင်း။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း. 2004;61(6):597–606. [PubMed]
ငယ်ရွယ်သော RM၊ Lawford BR၊ Nutting A. ၊ Noble EP မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇတိုးတက်မှုနှင့်ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှုကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း - D1 dopamine receptor gene ၏ A2 allele ကိုလေ့လာခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 2004; 29 (7): 1275-1294 ။ [PubMed]
Zai CC, Ehtesham S. , Choi E. , Nowrouzi B. , de Luca V. , Stankovich L. , Davidge K. , Freeman N. , King N. , Kennedy JL, Beitchman JH Dopaminergic system မျိုးဗီဇ - ဖြစ်နိုင်သောအခန်းကဏ္ role DRD2 များအတွက်။ ဇီဝစိတ်ရောဂါကုသမှု၏ကမ္ဘာ့ဂျာနယ်. 2012;13(1):65–74. [PubMed]
Zhang L. , Hu L. , Li X. , Zhang J. , Chen B. DRD2 rs1800497 polymorphic သည်စိတ်အခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည် - meta-analysis သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းမှသက်သေသာဓက။ အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorders ၏ဂျာနယ်။ 2014; 158: 71-77 ။ [PubMed]
Zhu Q. , Shih JC ကျယ်ပြန့်သောထပ်ဖွဲ့စည်းပုံသည်လူ့ monoamine oxidase သည်အစပျိုးလုပ်ဆောင်မှုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်၏လွတ်လပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ Neurochemistry ၏ဂျာနယ်။ 1997; 69 (4): 1368-1373 ။ [PubMed]
ZD YF၊ ဝမ်အက်ဖ်၊ Feng XL၊ လီ WF၊ Tian YH၊ Tao JH၊ Pan FM၊ DRD2 မျိုးဗီဇပိုလီဖော့ဖ်၏ Huang အက်ဖ်အသင်းအနေဖြင့်စိတ်မမှန်မှုများ - Meta-analysis အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorders ၏ဂျာနယ်. 2012;136(3):229–237. [PubMed]